“Way I Dhaawacdaa In……” Mikel Arteta Oo Qirasho Layaab Leh Ka Sameeyay Dareenkiisa Dhabta Ah Ee Inuu Mesut Ozil Fogeeyay – Laacibnet.net
“Way I Dhaawacdaa In……” Mikel Arteta Oo Qirasho Layaab Leh Ka Sameeyay Dareenkiisa Dhabta Ah Ee Inuu Mesut Ozil Fogeeyay
November 20, 2020 Apdihakem Omer Adam
Tababaraha kooxda Arsenal ee Mikel Arteta ayaa ka hadlay markale inuu liiska xiddigaha kooxdiisa uga qayb qaadanaya Premier League iyo Europe League ka reebay Mesut Ozil isaga oo si cad u qirtay inuu go’aankaasi dhaawaco.
Ozil oo heshiiskiisa Emirates yahay ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan ahna xiddiga ugu mushaharka badan kooxdaas maadaama oo uu 350,000 oo Pound qaato toddobaadkii ayaan wali hal kulan xilli ciyaareedkan metelin Arsenal.
Kubad sameeyahan oo kulankii ugu dambeeyay ee uu Arsenal u ciyaaray uu ahaa bishii March ee sanadkan ayaa kaliya qayb ka qaadan kara kulamada xiddigaha 23 sano jirada ka yar ee kooxdiisa.
Haatan Mikel Arteta oo beIN Sports u warramay ayaa sheegay inay dhaawacdo xaqiiqda ah inuusan Ozil soo xulan maadaama oo aysan ahayn in qofna sidaas loola dhaqmo.
Dhinaca kale Arteta ayaa si cad u sheegay inuu isagu yahay qofka go’aamada kooxda gaadha markastana uu doonayo inuu gaadho go’aamada uu filanayo inay u fiican yihiin kooxdiisa.
“Way i dhaawacdaa sababtoo ah anigu ma jecli in ciyaaryahan safkayga kamid ahi inuusan helin suurogalnimada uu kaga qayb qaadan karo ama uu tartamo, aniga ahaan dhab ahaantii waa murugo sababtoo ah uma malaynayo inuu qofna sidaas u qalmo” ayuu yidhi Arteta.
“Laakiin kama dambaysta maalinta halkan ayaan u joogaa si aan go’aano u gaadho, inaan gaadho go’aamada aniga aragtidayda ah kuwa ugu fiican ee koox kubadda cagta ah, tanina waa waxa ay tahay inaan sameeyo”
Dad badan ayaa hal abuur la’aanta kubadeed ee Arsenal xilli ciyaareedkan haysata ku eedaynaya Arteta iyo go’aanka uu Ozil oo kamida xiddigaha ugu hal abuurka fiican kaga reebay kooxda.
Please sheekada özil waan ka dharagsanahay iyo sababta looga reebay kooda maha arin kubaded ee arinki Chineska ee nagadaya muhiim maha özil lacag bilaash ow iska qaata waana soo baashaalay kobab badana waa haysta